Samachar Batika || News from Nepal » तपाईंलाई अंग्रेजी नै आउँदैन कसरी प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ ?
तपाईंलाई अंग्रेजी नै आउँदैन कसरी प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ ?
काठमाडौं । पार्टीमा एमसीसी प्रकरण पेचिलो बनिरहेका बेला केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका उपाध्यक्ष समेत रहेका गौतमलाई बालुवाटार बोलाए ।
कहिले प्रधानमन्त्री त कहिले राष्ट्रियसभा सदस्य बन्ने भनेर चर्चामा आउने गौतम ओलीले बोलाएपछि बालुवाटार पुग्ने नै भए । जब गौतम बालुवाटार पुगे ओली र गौतमबीच अन्तरंग कुराकानी सुरु भयो । त्यसक्रममा तत्कालिन एमाले माले हुदै अहिलेको नेकपा बन्दा सम्मका कुराकानी भए । यसमा एकले अर्कोलाई सहयोग गर्दै अघि बढेको ओलीले गौतमलाई स्मरण गराए ।
प्रमओलीले यस्तो कुरा गरेपछि गौतमले पनि आफूलाई पहिला प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर दिएको आश्वसन ओलीलाई स्मरण गराएका थिए । त्यसक्रममा गौतमले आफूलाई सधै आश्वसन दिने तर पूरा नगर्ने भन्दै गु’नासो मात्रै गरेनन्, अझ अघि बढ्दै भने, ‘तपाईं कहिले प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्नुहुन्छ, कहिले राष्ट्रियसभामा लैजान्छु भन्नुहुन्छ तर पार लगाउने गरी केही काम गर्नुहुन्न ।’
ओलीले रमाइलो जवाफ दिएका थिए । ‘तपाईंलाई अङ्ग्रजी नै आउँदैन । अङ्ग्रेजी नआउने मान्छे अहिलेको जमानामा कसरी प्रधानमन्त्री बन्छ ?
ओलीको यस्तो प्रतिकृया पाएपछि गौतमले पनि ‘तपाईं कुन चाहिँ अंग्रेजी जान्ने हो र ? उखान टुक्काका भरमा चाहिँ सधैँ देश चल्छ ?’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए । ओली गौतमबीचको यस्तो सवाल जवाफपछि गौतमले आफूलाई ओलीले यस्तोसम्म व्यवहार गरे भन्दै सचिवालयका अन्य सदस्यसँग गु’नासो गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति २ असार २०७७, मंगलवार ०२:०७